Samsung ရဲ့ Galaxy Tab ကို S2 ပြန်လည်သုံးသပ်: အပါးလွှာဆုံး, တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူပေါ့ပါးဆုံး Tablet ကို - သတင်း Rule
Samsung ရဲ့ Galaxy Tab ကို S2 ပြန်လည်သုံးသပ်: အပါးလွှာဆုံး, တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူပေါ့ပါးဆုံး Tablet ကို
က Galaxy Tab ကို S2 ယနေ့အထိ Samsung ရဲ့အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာပါးလွှာမယ့်, အလင်း, တစ်စိတ်ကူးမျက်နှာပြင်ရှိပြီးကန့်သတ် side-by-side multitasking ကိုလုပျနိုငျ.
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Samsung ရဲ့ Galaxy Tab ကို S2 ပြန်လည်သုံးသပ်: အပါးလွှာဆုံး, တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူပေါ့ပါးဆုံး Tablet ကို” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 28 အောက်တိုဘာလအပေါ် theguardian.com များအတွက် 2015 07.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Samsung ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ် Galaxy Tab S2 တက်ဘလက်သေးအပါးလွှာဆုံးဖြစ်ပါတယ်, Apple နှင့် Sony ကနှစ်ဦးစလုံး outdoing, ထိုသို့ရုပ်ရှင်တွေရာပေါင်းများစွာသိုလှောင်ဘို့အတက်ကြွ 9.7in screen နဲ့ကာ microSD card slot နှင့်အတူကြွလာ.
ထိုအထိနောက်သို့လိုက် Galaxy Tab S, ပထမဦးဆုံးအမှန်တကယ်ကောင်းသော Samsung ကတက်ဘလက်, ဒီဇိုင်းနှင့်မြန်နှုန်းအပေါ်ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်, ဒါပေမဲ့တစ်ဦး squarer တစ်များအတွက် widescreen swaps, ဒါကြောင့် Apple ၏ iPad အားတစ်ဦးထက်ပိုတိုက်ရိုက်စိန်ခေါ်အောင်.
အဆိုပါ Tab ကို S2 ကိုကိုင်ထားရန်လွယ်ကူသည်, စာဖတ်ခြင်းဘို့တလက်ကိုအသုံးပွုဖို့လုံလောက်တဲ့အလင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်တတျနိုငျသ 9.7in တက်ဘလက်အဖြစ်အနည်းငယ်သာအာကာသကိုတက်ယူ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
တက်ဘလက်ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်တဲ့ plateaux ရောက်ရှိခဲ့သည်. အဆိုပါ S2 ဒီပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်: ဒါကြောင့်ပါးလွှာသောင်, အလင်းနှင့်တစ်ဦး 9.7in screen ကိုရှိပါတယ် - ကအခြားအလုနီးပါးအရာအားလုံးကိုဆင်တူင်.
တကယ်တော့, 5.6mm အထူနှင့်အလေးချိန် 389g မှာ, ကထက် 1mm ပိုမိုပါးလွှာခြင်းနှင့် 76g ပေါ့ပါးရဲ့ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် Tab S ကို, 0.5ပိုမိုပါးလွှာခြင်းနှင့်ထက် 4g ပေါ့ပါးမီလီမီတာ Sony ၏ Xperia Z4 Tablet ကို ထက်ပေါ့ပါး 0.5mm ပိုမိုပါးလွှာခြင်းနှင့် 48g Apple ၏ iPad Air လေကြောင်းလိုင်း 2.
ဒီဇိုင်း understeer ဖြစ်ပါသည်. ပါးလွှာသော bezel နှင့်အတူတစ်ဦးက 9.7in screen ကို, သတ္တုနှစ်ဖက်နှင့် Matt ပလပ်စတစ်ပြန်. တစ်ဦးကသေးငယ် 8 ဗားရှင်းလည်းရရှိနိုင်ပါသည်. မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်အ home button ကိုကအောက်မှာဝှက်ထားတဲ့လက်ဗွေစကင်နာရှိပါတယ်. နောက်ကျောမှာ Samsung ရဲ့အမျိုးမျိုးသောရောဂါဖြစ်ပွားမှုပူးတွဲနှစ်ခု popper ခလုတ်ကိုတွင်းရှိပါတယ်.
မျက်နှာပြင်ပြပွဲ၏အဓိကကြယ်ပွင့်သည်နှင့်, ပြီးခဲ့သည့်နှစ် Tab S ကိုနှင့်ဝသကဲ့သို့, ကရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. ကြွယ်ဝသော, တက်ကြွသောအရောင်အဆင်းနှင့်နက်ရ​​ှိုင်းသော, inky လူမည်းဗီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုစိတ်ကူးကြည့်ရှုစေပါ. ဒါဟာတစ် pixel သိပ်သည်းဆရှိပါတယ် 264 ကချွန်ထက်သောအအဖြစ်အောင်လက်မနှုန်း pixels ကို iPad Air ရဲ့2- ၎င်း၏အဓိကပြိုင်ဘက်. အများဆုံးအခြား Android tablet များနှင့်မတူဘဲအမျက်နှာပြင်၌ရှိ၏ 4:3 အချိုးအစား, အိုင်ပက်ကဲ့သို့တူညီသော, စာဖတ်ခြင်းစာအုပ်တွေများအတွက်ပိုကောင်းသောဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရသောအခါကြီးမားသောအနက်ရောင်ဘားမျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းနဲ့အောက်ခြေမြင်နိုင်ကြသည်ကိုဆိုလိုသည်.
Screen ကို: 8ဒါမှမဟုတ် 9.7in (1536 x က 2048) super AMOLED (264 ppi)
processor: Samsung က Exynos 5433 Octa-core ကို (1.9 GHz မြန်နှုန်း Quad-core + 1.3GHz အမြန်နှုန်း quadcore)
သိုလှောင်ခြင်း: 32GB ကို; microSD slot ပါလည်းရရှိနိုင်
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Android မှာ 5.0.2 Lollipop
ကင်မရာကို: 8လွှတ်တော်အမတ်နောက်ဘက်ကင်မရာက, 2.1အမတ် front-facing ကင်မရာကို
connectivity ကို: ဝိုင်ဖိုင်, ဘလူးတုသ် 4.1 BLE နှင့် GPS စနစ်နှင့်အတူ (LTE ကိုရွေးချယ်နိုင်)
ဒိုင်မန်းရှင်း: 237.3 x က 169.0 x က 5.6mm
ဘေးထွက်တစ် microSD card slot ရုပ်ရှင်တွေများအတွက်အာကာသထည့်သွင်းစေသည်, ဂီတနှင့်ဓာတ်ပုံများလွယ်ကူသော. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Samsung ကထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်က၎င်း၏စမတ်ဖုန်းများအတွင်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပရိုဆက်ဆာကိုအသုံးပြုအောင်မြင်မှုကိုရှာတွေ့ခဲ့သည် galaxy S6, လက်ရှိရရှိနိုင်အမြန်ဆုံးစမတ်ဖုန်း၏တဦးတည်း. အဆိုပါ Tab ကို S2 ရဲ့ Processor ​​ကိုဖြစ်ပါတယ်, သို့သော်, အတော်လေးအဖြစ်အစာမရှောင်. အလုပ်ကအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအဘို့ပြုနေဆဲမကြာသေးမီကအသုံးပြု apps များစာရင်းနှင့်ထုတ်အထူးသဖြင့်ရေငုပ်တုံ့ပြန်မှုခံစားရရရှိ, ဒါပေမဲ့နေ့-to-နေ့ကအသုံးပြုမှုအတွက် Galaxy S6 ကဲ့သို့လျင်မြန်စွာမခံစားရပါဘူး.
multitasking အတော်လေးနာကျင်မှု့မရှိတဲ့ခဲ့သည်. Samsung ရဲ့အန်းဒရွိုက်တက်ဘလက်သငျသညျနှစျဦး applications တွေကို side-by-side ကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြု, ဒါပေမဲ့သာ apps များ၏ကန့်သတ်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်. သောသူတို့ကိုအလုပ်, ထိုကဲ့သို့သော Chrome နဲ့ Gmail ကိုအဖြစ်, ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်. ငါထောက်ခံ apps စာရင်းကိုကြာကြာခဲ့ဆန္ဒရှိ. အပလီကေးရှင်းအရွယ်အစားကိုချုံ့နေဆဲလည်းချောမွေ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါတက်ဘလက်ဗီဒီယိုကစားမျှကိစ္စများခဲ့, အထူးဆန်းဂိမ်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း. ထိုကဲ့သို့သော Nova အဖြစ် graphically အထူးကြပ်မတ်ဂိမ်းချောချောမွေ့မွေ့ပြေး, ဒါပေမဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်းတစ်ဦးထိခိုက်ယူ.
ဘက်ထရီသက်တမ်းကောင်းသောဒါပေမဲ့ခြွင်းချက်မဟုတ်ခဲ့. ငါဖန်သားပြင်နှင့်အတူကာတွန်းစာဖတ်ခြင်းခုနစ်နာရီဝန်းကျင်ကအတော်လေးတောက်ပတယ်, ကောင်းမြတ်သောအရာသည်. standby အချိန်အတော်လေးအဖြစ်အထင်ကြီးမဟုတ်ခဲ့. တစ်ဦးကကော်ဖီစားပွဲပေါ်ကျန်ရစ်နှင့်ရံဖန်ရံခါအသုံးပြုပါကသုံးရက်အတွင်းသေခြင်းတရားဟာမည်ဖြစ်ကြောင်း, သောက Android tablet များနှင့်အတူတစ်ဘုံပြဿနာဖြစ်ပါသည် - အားဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်ကိုတဦးတည်း Android မှာ 6.0 Marshmallow. Samsung ရဲ့ power-saving mode ကိုအနည်းငယ်ကကူညီပေးခဲ့.
ဒါဟာအပြည့်အဝကိုအားသွင်းဖို့ပဲအောက်မှာလေးနာရီကိုယူ. ရရှိနိုင်မရအစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းရှိခဲ့သည်, စိတ်ပျက်စရာဖြစ်သည့်.
multi ကြည့်ရန် app နှစ်ခုကိုတစ်ချိန်တည်းမှာ screen ပေါ်မှာ side-by-side အသုံးပြုခွင့်ပြု. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အန်းဒရွိုက်နှင့်အတူအဆိုပါ Tab ကို S2 သင်္ဘောများ 5.0.2 UK ရှိနှင့် Android update လုပ်ခံရဖို့များကြောင့်ဖြစ်ပါသည် 5.1, ဒါပေမယ့် update ကိုငါ device ကိုစမ်းသပ်ပြီးစီးခဲ့သောအချိန်အားဖြင့်ရောက်ရှိလာဘူး.
အန်းဒရွိုက်မှ Samsung ရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်း "TouchWiz" ပြုပြင်မွမ်းမံပစ္စုပ္ပန်များမှာ. သူတို့ထဲကအများစုဟာအဖြစ်ချောမွေ့ပြောင်လက်နှင့်စံက Android အတှေ့အကွုံအဖြစ်ရှာဖွေနေကောင်းသောအလှကုန်ပစ္စည်းနှင့်မဟုတ်.
အ customisible တချို့ကစံကို Android ကနေချို့တဲ့မှုအရာထည့်ပါ. ကောင်းသောသူမြား Multi Window ပါဝင်, apps များ၏သေးငယ်တဲ့ရွေးချယ်ရေးတစ် screen ပေါ်မှာ side-by-side ထားခံရဖို့ခွင့်ပြုတော်မူသော, တစ်ကြိမ်မှာနှစ်ဦး.
Samsung ရဲ့စမတ်နေထိုင်, သောသငျသညျမှာရှာနေကြသောအခါအပေါ်မျက်နှာပြင်စောင့်ရှောက်, သင်တစ်ဦးတစ်မိနစ်သို့မဟုတ်ဒီတော့အဘို့ကုလားကာကိုမထိမခိုက်စေခြင်းငှါ, အခါ, စာဖတ်ခြင်းများအတွက်အထူးသဖြင့်နေရာလေးကိုဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါကင်မရာကိုလမျး၌မရပေနှင့်တစ်ဦးအဖြစ်တော့အတွက်ပြုကြမည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါကင်မရာများပြီးခဲ့သည့်နှစ် Tab S ကိုကင်မရာများဆင်တူ, တက်ဘလက်ကင်မရာများဘို့အတော်လေးတောက်ပနေသော, ဒါပေမဲ့ခြစ်ရာမှတက်နေကြသည်မဟုတ်တစ်လျောက်ပတ်တဲ့ mid-range စမတ်ဖုန်းကင်မရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်. ငါကသင့်ရဲ့မူလတန်းအားလပ်ရက်ကင်မရာကိုအောင်ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်ကြပါဘူး
အဆိုပါလက်ဗွေစကင်နာကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်မည်သည့်အရာလမ်းဖွင့်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
device ကိုဖော်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာဟာများအတွက်လက်ဗွေစကင်နာများနှင့်အချို့သော Third-party apps များအဖြစ်အ home ခလုတ်ကို Doubles. ဒါဟာအစာရှောင်င်, သူတို့ထဲကအကောင်းဆုံးကိုအတူတက်အဲဒီမှာတိကျမှုနှင့်, လျှင်ပင်ဇောက်ထိုး.
အဆိုပါ Samsung ရဲ့ Galaxy Tab ကို S2 နှစ်ခုအရွယ်အစားလာ, အတူသို့မဟုတ် 4G မပါဘဲ. ပြန်လည်သုံးသပ်အဖြစ် 9.7in သိုလှောင်မှုကို Wi-Fi နှင့် 32GB နှင့်အတူက Galaxy Tab ကို S2 အနက်ရောင်သို့မဟုတ်ရွှေ£ 399 ကုန်ကျ. Wi-Fi ကိုအတူ 8 version ကို£ 319 ကုန်ကျ. 4က G ဗားရှင်း£ 50 ကပိုပြီးကုန်ကျ.
နှိုင်းယှဉ်, Apple ၏ iPad Air လေကြောင်းလိုင်း2သိုလှောင်မှု 16GB £ 399 ကုန်ကျနှင့် Sony ၏ Xperia Z4 Tablet ကို တစ်ဘလူးတုသ်ကီးဘုတ်နှင့်အတူ£ 500 ကုန်ကျ.
အဆိုပါမြတ်သောမျက်နှာပြင်ရုပ်ပြစေသည်, ကြည့်ရှုရန်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းလည်း. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ 4:3 အချိုးမျက်နှာပြင်တစ်ဦးအမှားဖြစ်ပါသည်, သို့သော်, ဒါကြောင့်ဗီဒီယို widescreen ရှိသူထက်ဆင်းရဲတဲ့အတှေ့အကွုံကိုကြည့်စေသည်အဖြစ်. ဒါဟာအစ Samsung ရဲ့ထိပ်တန်းအဆုံးစမတ်ဖုန်းအဖြစ် sprightly မဟုတ်ပါဘူး, သောစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပြီးကက Ga​​laxy S6 ကဲ့သို့တူညီသော processor ​​ကိုမရှိပါဘူးဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပေါ်ပေါက်?
၎င်း၏အဓိကပြိုင်ဘက်အသည် iPad Air ရဲ့ 2. အတူတူပိုက်ဆံဘို့သင့်ကိုပိုကောင်းတဲ့မျက်နှာပြင်ရ, Samsung ကပိုမိုသိုလှောင်မှုနဲ့ကာ microSD card slot, ဒါပေမဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပါသည်. နောက်ဆုံးပေါ်ဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ update ကို Android မှာ 6.0 Marshmallow ကူညီစေခြင်းငှါ.
အကောင်းအဆိုး: ကန့်သတ် multitasking, လက်ဗွေစကင်နာ, မြတ်သောမျက်နှာပြင်, ပိန်သော, အလင်း, microSD card slot
Cons: 4:3 ဗီဒီယိုကိုကြည့်ဘို့ပိုဆိုးအချိုးအစားမျက်နှာပြင်, ဘက်ထရီသက်တမ်းပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်, အဘယ်သူမျှမအမြန်အားသွင်း, ပလပ်စတစ်ပြန်ပြိုင်ဘက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စျေးပေါခံစားရ
အဆိုပါ squarer မျက်နှာပြင်ထိုကဲ့သို့သောဂါးဒီးယန်းအဖြစ် apps များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များပိုမိုလွယ်ကူကြည့်ရှုစေသည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Sony Xperia Z4 Tablet ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: လည်းတစ်ဦးကို Android နဲ့ Laptop ရဲ့သောပါးလွှာသောတက်ဘလက်
Samsung ၏ Galaxy Tab S ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကအသစ်တစ်ခုတွက်ရင်
Apple က iPad ကို Air လေကြောင်းလိုင်း2ပြန်လည်သုံးသပ်မှု : သေး Apple ရဲ့အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်, သို့သော်လုံလောက်ပါတယ်?
Microsoft က Surface က3ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: အကောင်းဆုံးအတက်ဘလက်-Laptop ကို hybrids တွေကိုတယောက်
Android မှာ, အပိုဒ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, Samsung က, ရှမွေလသည် Gibbs, တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာများ, နည်းပညာ
← HTC One ကို A9 [VIDEO] ဟယ်လို: 10 သင့်ရဲ့ smartphone ကိုအပေါ် spook ဖို့အကောင်းဆုံး app များ၏ →